Chii chinonzi SMS? Mobile Rugwaro Kushambadzira Tsananguro
China, July 16, 2015 Muvhuro, Ndira 16, 2017 Adam Mudiki
Chii chinonzi SMS? Chii chinonzi MMS? Chii chinonzi Mapfupi Makodhi? Chii chinonzi SMS Keyword? With Mobile Marketing ndichiwedzera kuwedzera ndaifunga kuti ingave iri zano rakanaka kutsanangura mamwe mazwi ekutanga anoshandiswa muindastiri yekushambadzira indasitiri.
SMS (Ipfupi Meseji Service)- Chiyero cheterevhizheni mameseji masisitimu ayo anotendera kutumira mameseji pakati pezvifoni nharembozha zvine mameseji mapfupi, kazhinji aine zvinyorwa chete zvemukati. (Meseji Meseji)
MMS (Multimedia Kutumira Meseji Service) inzira yakajairika yekutumira mameseji anosanganisira zvemultimedia zvemukati kuenda uye kubva kunhare mbozha.
Yakajairwa Shortcode (Shortcode)- Mapfupi manhamba manhamba (kazhinji 4-6 manhamba) ayo mameseji anogona kutumirwa kubva kunhare mbozha. Vanyoreri vasina waya vanotumira mameseji kumakhodhi mapfupi akajairika aine akakosha mazwi ekuwana mhando dzakasiyana dzemafoni.
guru- Izwi kana zita rinoshandiswa kusiyanisa yakanangwa meseji mukati me Ipfupi Code Service.
Aya ndiwo mamwe mazwi ekutanga anoshandiswa mu Kushambadzira kweSMS. Kunyangwe nedudziro ye shortcode vanhu vazhinji vachiri kuda imwezve tsananguro yekuti inoshanda sei pamwe chete.
Ini ndinoedza kuzvitsanangura maererano neInternet nemazita ezita Funga nezve a Shortcode zvakafanana nezita rezita uye a guru yakafanana nepeji. Paunenge uchida nhau iwe unogona kuenda ku mhosva (Keyword) peji re CNN.com (Shortcode).
Kana ... kunyangwe zvirinani, kana iwe uchida kunyorera kuburikidza neemail ku Martech Zone, zvinyorwa Marketing (Keyword) kusvika 71813. Edza izvozvo… ndizvozvo chinyorwa chekunyorera kusangana pakati pedu sevhisi yeSMS uye CircuPress!
Kutumira mameseji kunogona kushandiswa kupa / kubhadhara mari kana kupfuudza chinongedzo chemushandisi wekushandisa kuona webhusaiti, kuvhura kunyorera, kana kutarisa vhidhiyo pane yavo nhare mbozha.
Chii chinonzi SMS Kushambadzira
Mafurati akafanana Kubatanidza Nhare bvumira vatengesi kugovera izwi rakakosha uye shortcode yevashandisi kunyorera kumeseji mameseji. Nekuti mameseji anotyisa kwazvo, vazhinji vanopa vanoda nzira mbiri dzekupinda-mukati. Ndokunge, iwe unonyorera iro kiyi kiyi kodhi pfupi, wobva wawana chikumbiro kumashure uchikumbira iwe kuti upinde nechiziviso chekuti meseji dzinogona kupinza mhosva zvichienderana nemupi wako. Iwo mapuratifomu ekunyorera anowanzo bvumidza iwe kuronga mameseji uye kuona kushuma pamusoro pekuita mushandirapamwe.
Heino vhidhiyo yekuti nei Kushambadzira kweSMS kuchishanda kwazvo:
Heino nhoroondo huru yeMeseji Meseji kubva NeonSMS:
* Idzi tsananguro dzinoenderana ne Mobile Kushambadzira Association. Zvimwe zvinotsanangurwa zvinowanikwa pa Kubatanidza Nhare.
Tags: circupressinobatanidza nharemazwi akadzamatsananguro dzemafonimapfupi macodepfupi meseji systemSMSsms kushambadzamaSmsmameseji kushambadziratext messageschinyorwa chekunyorerakutumira mamesejindeipi pfupi kodhichii chinonzi sms kiyichii mmschii chinonzi sms
Jul 24, 2009 na10: 52 PM
Mufananidzo wakanaka, Adam! Ini ndaive paInternet Kushambadzira Summit pasi muHouston uye mumwe wevatarisi akashandisa nzira iyi. Akakumbira munhu wese kuti atumire email kero pamwe nekiyi kiyi kune ipfupi kodhi uye ivo vaizotumira email kuratidzwa kwavari.
Jul 25, 2009 pa 3: 26 AM
Ndatenda Doug! Ndiro rimwe remasevhisi atinopa kuConnective.
Gumiguru 15, 2014 pa 5:41 AM
Inobatanidza inopa zvakare API kusangana?
Gumiguru 15, 2014 pa 8:50 AM
Ehe, Kubatanidza Nhare ine API yakazara.